Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Baa Maanta Kusii Jeedo Dalka Qatar – Banaadir weyne
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Baa Maanta Kusii Jeedo Dalka Qatar
13 Maajo, 2018
Muqdisho (WBW: The GBM) – Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho aa laga soo sheegayaa in maanta ay ka duuleyso ergo uu horkacayo Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo ergadaasi uu horkacayo ay kusii jeedo Dalka Boqortooyada Qatar.
Booqashada Farmaajo iyo ergada uu horkacayaba, aa waxey kusoo aadeysaa xili uu sii xoogeysanayo xiriirka u dhexeeyo dalalka Soomaaliya iyo Qatar.
5-tii bishii Juunyo, gugii 2017-dii ay aheyd markii dalalka Sacuudi Caraabiya, Masar, Baxreyn iyo Imaaraadka Carabta ay xiriirka u jarayeen Dalka Qatar, waxaana markaasi u cadaatay in Dalka Qatar uu taageero Argagixisada Caalamka isla markaana uu hoysiiyo argagixisada.
Horay wuxuu Dalka Qatar uga qeybqaatay doorashadii uu 8-dii Febraayo, 2017-dii uu kusoo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna markaasi uu Dalka Qatar uu bixiyay lacag dhan 6992000 (Lix Milyan Sagaal Boqol iyo Sagaashan iyo Labo Kun) oo Doolarka Mareykan ah; waxaana lacagtaasi loo qeybiyay Xildhibaano gaarayo 184 iyada uu mid kastaa uu qaatay 38000 (Sodon iyo Sideed Kun) oo Doolarka Mareykan ah.
Kala soco Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]), wixii war ah ee kusoo kordho.